Oromia: Seife Nebelbal Radio Program, May 11, 2012 - Ayyaantuu News
Oromia: Seife Nebelbal Radio Program, May 11, 2012 Afaan Oromo
5 comments - What do you think? Posted by admin - 11/05/2012 at 12:10 pm Categories:
5 Responses to “Oromia: Seife Nebelbal Radio Program, May 11, 2012”
Gurraachoo Silgaa says:	11/05/2012 at 9:03 am	Sagantaa kana qopheessuu keessaniif Waaqayyo isiniif haa tolu.
Qabsaawaa waggaa kana hunda muuxannoo horataniifi yaada bilchaataa qabsoo Oromoorratti qaban nuuf dhiyeessitan. Hunda caalaa yaada ummata irra jireessa biyya keessa jiruu addeessan. Yaada isaanii kanas ABOn xiinxalee madaalee toora qabsoo qajeelchuu waan qabu natti fakkaata. Seera tumateenis buluu qaba. Akka korma saree seera tumee deebi’ee arraabuu hin qabu. Karaa biraa, namni yeroo ammanaa qabsoo keessa ture har’as hamileefi onnee akkanaan dubbachuun waan guddaadha. Namni hedduun haala kana keessatti nuffuu danda’a. Isaan garuu har’as nama qabsoo jalqabaa jiru. Kun qabsaa’ota biroof barumsa guddaadha.
Gaaffii: Dhaabni gandatti gale kun ofii hiikaafi kaayyoo qabsoo adda baasee beekaa? Maqaa ABO jedhu kanaan akkamiin of waamuu danda’a? Moo o9soo hin beekiin dogoggoraniiti kan ofii moggaasan?
Obsaa says:	11/05/2012 at 12:37 pm	Qabsaa’aan waggoota 33 oliif bilisummaa fi walabummaa oromoof qabsaa’aa turee fi qabsaa’aa jiru kun dalagaalee hojjetaa jiruuf galanni koo guddaa dha. haata’u malee namni qabsoo irratti muuxannoo haganaa qabu dhaaba siyaayaasaa eengadda dhaabbatan warra akka Ginboot 7 gowoomsamuun isaanii nama gaddisiisa. Waanti natti tole garuu teellaa irrattis yoo ta’e ofbeekanii akka haaraatti bilisummaa oromoof qabsaa’uuf murteeffachuu isaaniti.
Akkuma obbo Abbaan Faaroo jedhan maqaa Toophiyaa qabatanii oromoof nan qabsaa’a jechuun fudhatama hinqabu. Garee ykn dhaabbilee kabiraa wajjin hojjechuu jechuun kaayyoo fi sagantaa ofii qabannee tooftaa fi tarsiimoo tiif jecha ummata kabiroo waliin hojjechuu dha malee kaayyoo fi sagantaa ofii jijjiruun dhaaba ofii balleessanii kan ormaa fudhachuu fakkaata .
Obsaa says:	11/05/2012 at 12:50 pm	ABO isa kam jala jirta jedhanii irra deddeebi’anii nama gaafachuun hinbarbaachisu. Akkuma obbo Faarroon deebisan ABO jechuun isa ittidhiige, isa kaayyoo ganamaa qabtee adeeme, isa walabummaa fi bilisummaaf qabsaa’u. Kanaaf kuni ABO ebeluuti inni kun immoo kan ebeluuti jechuu dhiisnee hojii gaarii hojjennee hojiin haadubbatu.
omer obsaa says:	11/05/2012 at 1:37 pm	qopheessitoota qophii Radio Sief N sagantaan keessan baayyee gaariidha sabboontoota Oromoo jabaadhaa qoonni isin Bilisummaa Oromoottiif gumaachaa jirtan salphaamiti galatoomaa galanni keessan Bilisummaa haata’u
omer obsaa says:	11/05/2012 at 2:25 pm	qopheessitoota Radio Sief Nebelbal sagantaan keessan baayyee dansaadhaa jabaadhaa itti fufaa galanni keessan Bilisummaa haata’u